booliska magaalada new york oo shaaciyay in ay baxsadeen raggii ka danbeeyay qaraxii westgate ee nairobi kenya | warsugansomaliya.wordpress.com
booliska magaalada new york oo shaaciyay in ay baxsadeen raggii ka danbeeyay qaraxii westgate ee nairobi kenya
warsugansomaliya / December 11, 2013
Booliska magaalada New York ee ah xarunta gacancsiga ee waddanka Maraykanka ayaa shaaciyay inay u badantahay inay baxsadeen afartii nin ee qaaday weerarkii Westgate.
Warbixinta cusub ee ay soo saareen booliska magaalada New York ayaa beeninaysa hadalo horay ay u jeediyeen saraakiisha dhanka ammaanka ee Kenya kuwaasoo sheegay in raggii weerarka qaaday lagu dilay iska horimaad ka dhacay gudaha xaruntaas.
Warbixinta booliska New York ayaa sheegaysa in muuqaaladii ay duubeen kaamirooyinka ay ahaayeen kuwo muujinaya 12 saacadood kadib markii weerarku bilowday iyadoo ciidamada Kenyana ay ku qaadatay 4 maalmood inay si toos ah u galaan dhammaan qaybaha dhismaha Westgate.
Warbixinta ayaa lagu sheegay inaan wax cadayn ah loo haynin in la dilay raggii weerarka qaaday ayna u badantahay inay baxsadeen iyagoo taasna sabab ugu dhigay dabacsanaan ka timid xagga ciidamada Kenya.
Waxay sheegeen inay warbixintooda ku saleeyeen macluumaad sirdoon ah oo ay heleen.
Hay’ada booliska aduunka ee Interpol ayaa ka caawinaysa Kenya baaritaano lagu wado 4 qof oo maydkooda laga soo saaaray burburkii dhismaha kuwaasoo ay ciidamada Kenya uga shakiyeen inay yihiin kooxdii weerarka qaaday.
Alshabaab bog ay ku leedahay Internerka ayay horay ugu sheegtay in dhammaan raggii weerarka qaaday ay ahaayeen naftood hurayaal ku dhintay weerarkaas balse warbixintan cusub ee booliska New York ayaa shaki galinaysa arrinkaas.
Warbixintan cusub ayaa sidoo kale sheegtay inay liidatay wadashaqaynta ka dhexaysa ciidamada Militariga iyo booliska Kenya taasoo keentay in ciidamada Militarigu ay dilaan qaar kamid ah booliska intuu uu socday weerarkii Westgate.
Booliska New York ayaa ka digay in kooxaha argagixisadu ay qaadaan weeraro lamid ah kii Westgate oo lagu bartilmaameedsanayo xarumaha ganacsiga iyo goobaha laga dukaamaysto iyagoo ku dayanaya weerarkii Westgate oo ay ku dhinteen 67
by journalist faysal muuse adam.. email faysalhassan1@hotmail.com and website..www.warsugansomaliya.co.com
December 11, 2013 in Home, warka.
Daawo Muuqaal Xoogaga Alshabaab oo ku guul dareystay weerar ay ku qaadeen saldhiga ciidamada AMISOM ee Garoonka Kismaayo.
Taliyaha ciidamada militariga Kenya oo difaacay ciidankiisa kadib markii ay soo food saartay fadeexad xatooyo ah
Gudoomiyaha Gobalka Maroodi-jeex Oo Ugu Baaqay Dhalinyarada Xafadaha Hargeysa Inay Ka Fogaadaan Kooxo Kooxaysiga.
← Wafdi ka koobnaa Wasiirro iyo Xildhibaanno oo maanta booqday Magaalada Beledweyne ee Xarunta Gobolka
OGAYSIIS KU AADAN JAALIYADA KHATUMO STATE EE KU NOOL WADANKA UGANDHA →